အားကစားပွဲအတွက်သင့်တော်တဲ့ LED display screen ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ - ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုနံရံကပ်စက်ရုံ
မိုးလုံလေလုံဇာတ်စင် ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်
ပြင်ပဇာတ်စင် ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်
ဖန်တီးမှုကို ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်
အနိမ့်အစေး HD မျက်နှာပြင်
ပွင့်လင်း led မျက်နှာပြင်
ဦး ဆောင် display ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
စင်မြင့် LED display ကိုစီမံကိန်းများကို
HD ကို ဦး ဆောင် display ကိုမြို့ရိုးစီမံကိန်းများကို
ဖန်တီးမှု ဦး ဆောင် display ကိုစီမံကိန်းများကို
ဂုဏ် & အရည်အချင်းများ
အားကစားပွဲအတွက်သင့်တော်တဲ့ LED display screen ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ
LED display screen နှင့်အားကစားကွင်းသည်လက်ချင်းချိတ်ထားသည်. ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူအားကစားရုံတည်ထောင်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်, LED display screen သည်အလားအလာကောင်းများရှိလိမ့်မည်. ဒီတော့, အလားတူအားကစားကွင်းများအတွက်, အရောင်အပြည့် LED display ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ?
သင့်တော်သောအားကစားကွင်း LED display ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ
အသေးစိတ်လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်. ဥပမာ, မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံများဟုဆိုကြသည် (ဘတ်စကတ်ဘောကစားကွင်းများ, စသည်တို့) များသောအားဖြင့်အကွာအဝေးသေးငယ်တဲ့ LED ဖန်သားပြင်တွေအပြင်အပေါ်ကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်, နှင့်သေးငယ်သောအကွာအဝေးမျက်နှာပြင်များ (ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျားနိုင်သော) ဂိမ်းများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မျက်နှာပြင်အကြီးကိုလျှော့ချထားသည် (ဘတ်စကတ်ဘောကစားကွင်းများ, စသည်တို့).
2、 Screen Saver စွမ်းဆောင်ရည်
indoor သို့မဟုတ် outdoor gymnasium များအတွက်, အပူပေးခြင်းသည်အားကစားဖန်သားပြင်၏ချို့ယွင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အထူးသဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောရာသီဥတုနှင့်နယ်ပယ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ဖြစ်သည်, high flame retardant grade နှင့် protection grade တို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ယေဘုယျအနေဖြင့်, IP65 ၏ကာကွယ်မှုအဆင့်သည် V0 ဝါယာကြိုးမှလျှံထွက်နှုန်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်.
အထူးသဖြင့်ကွင်းပြင်အားကစားပြိုင်ပွဲများဖြစ်သည်, ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏အထူးပြောင်းလဲနိုင်သောရာသီဥတုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်. ဥပမာ, တောင်ပိုင်းကမ်းခြေသည်အစိုဓာတ်ကိုအဓိကထားသင့်သည်, ကုန်းပြင်မြင့်ဒေသသည်အအေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်, သဲကန္တာရဧရိယာသည်အအေးဒဏ်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်. ဒီဧရိယာထဲမှာ, ပိုမိုမြင့်မားသောကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုချမှတ်သင့်သည်.
3、 စုစုပေါင်းတောက်ပမှုအချိုး, အလင်းရောင်နှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှု
ပြင်ပအားကစားပြသမှုမျက်နှာပြင်သည် indoor ထက်ပိုမိုတောက်ပသည်, ဒါပေမယ့်အလင်းတန်ဖိုးပိုမြင့်တယ်, ပို၍ မသင့်တော်ပါ. ကြီးမားသော LED မျက်နှာပြင်အတွက်, စွမ်းအင်ချွေတာရေး LED display ထုတ်ကုန်များရွေးချယ်ခြင်းသည်လုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်သည်, တောက်ပမှုကိုအပြည့်အ ၀ စဉ်းစားခြင်းဖြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်း, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်မရှိခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုလိုအပ်ချက်များ.
ကိရိယာ၏တည်နေရာသည် LED display ၏ device mode ကိုဆုံးဖြတ်သည်. ကစားကွင်းများနှင့်အားကစားရုံများတွင်မျက်နှာပြင်များတပ်ဆင်သောအခါ, ဖန်သားပြင်များသည်ဆင်းသက်နိုင်မှုရှိမရှိကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်, နံရံကပ်, embedded နှင့်ရှေ့ / နောက်ဘက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
ကွင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ကွင်းကြီးတစ်ခုလိုပေါ့, Central Plains ကြားကာလ၌ကြည့်ရှုသူများ, ဘုံရွေးချယ်ရေးအချက်များမှကြီးမားသောအကွာအဝေးဖြင့်ပြသည်, P6 နှင့် P8 တို့သည်ကွင်း၌တွေ့ရသော ၂ မှတ်ကြားကာလများဖြစ်သည်. ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, indoor ပရိသတ်သည်ကြည့်ရှုမှုသိပ်သည်းဆမြင့်သည်, အနီးကပ်ကြည့်ရှုချိန်, integral interval သည် P4 နှင့် P5 ဖြစ်သည်. ဆဋ္ဌမ, အမြင်အာရုံကျယ်နိုင်သလား?
The seating positions of stadium spectators are different. ထို့ကြောင့်, on the same screen, the viewing angles of each spectator are gradually dispersed. By selecting the LED screen from Guangxi perspective, all spectators can enjoyagood viewing experience.
7、 မြင့်မားသော လန်းဆန်းမှုနှုန်း
မြင့်မားသော refresh rate display screen ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အားကစားပွဲကြီးများ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပုံများကိုချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်, လူ့မျက်လုံးများ၏ခံစားချက်သည် ပို၍ နွေးထွေးပြီးသဘာဝကျသည်.
ယေဘုယျအနေဖြင့်, အားကစားကွင်းသည် LED display screen ကိုရွေးချယ်လိုလျှင်, ဒီပြသနာတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ရွေးချယ်တဲ့အခါ, ထုတ်လုပ်သူသည်အားကစားကွင်း၏ဂိမ်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက်သင့်တော်သောကုသမှုအစီအစဉ်များကိုပြင်ဆင်နိုင်သလားဆိုသည်ကိုစူးစိုက်သင့်သည်.
LED display ရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ?
သေးငယ်သော pixel pitch LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်မီးအိမ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်
ပြင်ပ LED ကြော်ငြာစခရင်ကို ပြုပြင်ပြီး အားဖြည့်နည်း မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် ပြင်ပ LED ကြော်ငြာစခရင်ကို ပြုပြင်ပြီး အားဖြည့်နည်း
မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများသည် ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်မှု LED မျက်နှာပြင်များကို မည်သို့အသုံးပြုကြသနည်း။ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများသည် ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်မှု LED မျက်နှာပြင်များကို မည်သို့အသုံးပြုကြသနည်း။
LED display ရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED display ရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ
LED မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးပေါ်ရှိ အပူချိန်၏ သက်ရောက်မှုကား အဘယ်နည်း မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးပေါ်ရှိ အပူချိန်၏ သက်ရောက်မှုကား အဘယ်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးသောထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်အတူ 15 ဦး ဆောင် display ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း, မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပမှ ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုနံရံအပြည့်အဝကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ငှားရမ်းခအဆင့်ကနေပြသမှု ဦး ဆောင်ပြသမှုစီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာ Billboard အထိ.
သေးငယ်တဲ့အစေး HD ကို ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်
ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် Nationstar Kinglight ပြင်ပ RGB P5 320X160mm ဦးဆောင်သည့် မျက်နှာပြင်ကို ပြသပေးသည်။
P4 P5 P6 P8 P10 Smd ဧရာမကြော်ငြာ Billboard စျေးနှုန်း,Electronic Outdoor Led Display မျက်နှာပြင်
မြင့်မားသောတောက်ပ p10 Outdoor ဒစ်ဂျစ်တယ် ဦး ဆောင်သောကြော်ငြာဘေလ်ဘုတ်ကြော်ငြာဗွီဒီယိုနံရံ
မူပိုင်ခွင့်အားလုံး 2022 © ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ